Wasiiro iyo Xildhibaano Soomaali ah oo Shahaadooyin Musuqmaasuq uga helay Jaamacad Uganda ku taal. – Hornafrik Media Network
Wasiiro iyo Xildhibaano Soomaali ah oo Shahaadooyin Musuqmaasuq uga helay Jaamacad Uganda ku taal.
Mid ka mida Jaamacadaha Wadanka Uganda ugu caansan oo lagu magacaabo Stafford ayaa Albaabadda la isugu dhuftay, kadib markii lagu helay inay si Musuq Maasuq ah Shahaadooyin Jaamacadeed ku siisay Wasiiro iyo Xildhibaano Soomaaliyeed, kuwaas oo aan Maalina wax ka baran Jaamacadaas iyo kuwa xiriirka la leh toona.
Wargayska Vision ee ka soo baxa Uganda ayaa qoray in Wasiiradan iyo Xildhibaanadan ka tirsan Dowladda Somalia Lacago laga qaaday si Musuq Maasuq ah, lana siiyay Shahaadooyin Heer Jaamacadeed ah, iyadoo loo marsiiyay Jaamacadda Jobkey ee Muqdisho.
Inkastoo uusan Wargayska Vision soo bandhigin Magacyadda Wasiiradda iyo Xildhibaanadda sida Musuq Maasuqa leh lagu siiyay Shahaadooyinkan waxa uu haddana ku sheegay in Tirro badan oo Masuuliyiin Xilal Wasiiro iyo Xildhibaano ah loo sameeyay Shahaadooyin Jaamacadeed si aan loo liidin Aqoontooda Maadiga ah oo hoosaysay awgeed.
ka Sakoow Xogta uu Wargayskan soo bandhigay waxaa jira Shahaadooyin badan oo la aaminsan yahay in si Musuq Maasuq ah ay ku bixiyeen Jaamacado ku yaala Somalia, Kenya, iyo Uganda. Waxaana Musuq Maasuqa Shahaadooyinka Been Abuurka ah ee Jaamacadaha ay noqdeen kuwa Afrika ku badan.
Guddigii Loo Xil Saaray Baaritaanka Kiiskii Qalbi Dhagax Oo Waqtiga Loo Kordhiyay
Daawo Musuqmaasuq hareeyay Garsoorka Maxkamadda Sare iyo Bankiga Dhexe ee Somalia.